23 marsa 2017
21 Martsa, andro iraisam-pirenena ho an'ny poezia
Niezaka nanamarika izany avokoa ny fikambanana mivoy ny kolontsaina, ny minisitera sy ny sampan-draharaham-panjakana.
UNESCO sy ny Américan Corner Tanjombato
Nanomboka izany ny teny amin'ny Américan Corner Tanjombato, toerana ana vahiny saingy nahatsapa ny lanjan'ny kolontsaina. Narahan'ny tao amin'ny ANS Ampefiloha. Nahitana fifaninana tononkalo ho an'ny mpianatra nokarakarain'ny UNESCO ary notohanan'ny Minisiteran'ny kolontsaina, fampiroboroboana ny asa tanana ary fiarovana ny vakoka sy ny minisiteran'ny tanora sy ny fanatanjahan-tena. Nisitraka fiofanana ihany koa ny mpianatra liana amin'ny fanoratana.
Nanohy izany ny tao amin'ny tranombokim-pirenena Anosy tamin'ny fizaran'ny Minisiteran'ny kolontsaina mari-pankasitrahana ho an'izy efatra mianadahy (Ny eja, Fanja Razah, Rima, Avelo Nidor) nizara traikefa tamin'ny mpanoratra vao misandratra sy mari-pankasitrahana ho an'ny mpiofana.
HAVATSA-UPEM teo anoloan'ny TAHALA RARIHASINA
Nanakatona izany fankalazana izany ny HAVATSA-UPEM tamin'ny fanomezana sehatra ny mpanoratra rehetra niantsa teo anoloan'ny TAHALA RARIHASINA Analakely. Azo ambara ho feno tokoa ny fankalazana ary nitombo hasina sy lanja ny tononkalo Malagasy.
Sary: Hanitra Olive, Ny Eja, Lillac
Ireo mpitsara sy mpikarakara tao amin'ny Américan Corner Tanjombato
Ny tao amin'ny Tranombokim-pirenena Anosy
Ny HAVATSA-UPEM teny amin'ny Tahala Rarihasina Analakely